prompt အရှိဆုံးကသဘာဝနှင့်အန္တရာယ်ကင်း Shampoo &? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သူတို့သည်သောက်ပဲသူတို့ရဲ့ဆံပင်လျှော်ခြင်းမပြုခဲ့လျှင် :) အပေါင်းတို့, ဖော်ရွေ)
Byubhen: တင်းကြပ်စွာငါ့ဆံပင်ထဲကအပြာရောင်အဖုံး, Natura Siberika နှင့်ဆပ်ပြာနှင့်အတူအပြာ box ထဲမှာဆေးကြောခြင်းမရှိပါ။ ကြက်ဥအနှစ်အကြောင်းသဘောတူ, များစွာသောသူတို့၏ခေါင်းများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော်ပေမယ့်ငါ့ထံသို့သူသည်အများသောဆပ်ပြာထက်အများကြီးပိုကောင်းပေမယ့်, မလာခဲ့ပါဘူး။
Siberika သဘောသဘာဝ။ ဆေးဆိုင်အတွက်
hozyaystveenoe ဆပ်ပြာ) သို့မဟုတ်ကြက်ဥအနှစ်။
သငျသညျသော။ ရူးသွပ်သွားပြီ?! (((ဆပ်ပြာကဘာလဲ ... အစိုင်အခဲအယ်လကာလီသငျ washcloth သူတို့ရဲ့ဆံပင်ကနေချင်ပြုမိသနည်းဆံပင် pootkryvali ဆံပင်အားလုံးသည်ချိန်ခွင်အကြီးအကျယ် flogged, ကြွပ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွားဒါ probabushek, အတိတ် prezhitok, သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရိုးရှင်းစွာသန့်ရှင်းခံရမခံခဲ့ရ သငျသညျကလူရာစု 21 ပါလိမ့်မယ် ... ကျနော်တို့ရှိသည်သောခေါင်းလျှော်ရည်အခုစူပါရောင်းချကြသည်ဟုမဆိုကြဘူး။ ဒီမှာပါ။ ဆပ်ပြာအိမ်ထောင်စု dosih လျှော်ခြင်းနှင့်အကောင့်သို့မိမိတို့၏အသက်အရွယ်ယူပြီးသူတို့အများဆုံးအသိဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ အပေါင်းတို့နှင့်တကွစစ်မှန်တဲ့စမ်းသပ် ... သူတို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းကြဘူးကြဘူး! ဒါပေမယ့် ။ အဘယ်သူမျှမ။ ဒါပေမဲ့သူတို့မဆိုအမှု၌ဆံပင်ဖို့ပိုခွင့်လွှတ်ဖြစ်ကြသည်။ Poprorbuyte ခေါင်းလျှော်ရည် Grinn Ama, တူညီတဲ့သို့မဟုတ် elsevom Pantin နှင့်အတူဥပမာနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်သာဓာတုဗေဒလည်းမရှိဖွဲ့စည်းမှု။
Pro ကို Natura Siberika
Посоветовала приобрести мне этот шампунь — моя парикмахер. Это было около года назад, и у нас в городе найти этот шампунь — было еще весьма тяжело. Нашла в сети аптек. Купила сразу шампунь и бальзам. Тогда стали появляться передачи на тv о том как вредна вся наша косметика, о том что такое лаурет сульфат натрия (он же sls), парабены, фармальдегиды и пр. Конечно, косметика с заявкой «нет парабенов и sls» сразу привлекла внимание!
ငါသတိပြုမိသည်မှာ၎င်းသည်ကောင်းစွာရေမြှုပ်မထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကကျွန်မကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ဒီတော့ sls ကအဲဒီမှာမရှိ, သို့မဟုတ်ပါကအများကြီးမရှိ။ သူသည်ဆံပင်ကိုလန်းဆန်းစေပြီးအသံကိုထပ်မံဖြည့်တင်းသည်။ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဗာလစံစေးတစ်ဆံသာဆံပင်ကိုကျွေးမွေးရန်မလုံလောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုအခါငါအမြဲတမ်းမျက်နှာဖုံးများ (အိမ်နှင့်ဝယ်ယူနှစ် ဦး စလုံး) လုပ်ပါဒါကြောင့်, အစား, ဆံပင်များအတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်မျက်နှာဖုံးများ။ ပြီးတော့ငါ့အတွက်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာသန့်ရှင်းရေးနှင့်အသံဖြစ်သည် - natura siberica သည်သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်သည်။
သို့သော်ယခုငါဤခေါင်းလျှော်ရည်များသည်အလွန်အမြှုပ်များဖြစ်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုမရေမရာသံသယများဖြင့်စတင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည် - ထုတ်လုပ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆုံးတိုင်အောင်ရိုးသားသလား။ )
1.большой и симпатичный перечень aqua with infusios of organic extracts (далее идет весьма внушительный перечень экстрактов разных трав и цветов — ай, красота! ) — на самом деле это всего лишь вода, да — на отваре трав, но это вода=) А на сайте сиберики, они так и написала «просто вода» без всяких экстрактов.
၂။ ဒုတိယဂလူးကို့စ်နှင့်အုန်းသီးဆီ။ ဒါနဲ့ဘယ်လိုတိရိစ္ဆာန်မျိုးကိုငါစရှာခဲ့တယ်။ ဒါဟာထွက်တွက်ဆခဲ့ကြပုံရသည် - ဤ sls ၏ဆင်းသက်လာသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ပျော့အရေးယူမှု (အနည်းဆုံးကနှစ်သက်) ။ ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲမှတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့စဉ်က၎င်းသည် ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော surfactant ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုကိုထပ် extracts လာ, ပင်လယ် buckthorn ရေနံ (ကောင်းလှ၏!)
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲမှရှုပ်ထွေးနေဆဲ - ၃ နှစ်။ ၃ လကြာပြီးနောက်သဘာဝအလှကုန်များသည်ဆိုးရွားသွားသည်။
ယခုငါသည်ဤခေါင်းလျှော်ရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတာပါ, ဒါကြောင့်အားလုံးအတူတူပင်, ငါ့ကိုအကိုက်ညီဆုံး, ငါသည်သူသည်အခြား Shampoo & ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမယ့်မျှော်လင့်ပါတယ်။ စကားမစပ် layril sulfate ကိုရှောင်ရှား, ငါသူ laureth sulfate ပိုဆိုးခဲ့ကြောင်းကြား၏။
ထို့အပြင် pluses မှ:
ကောင်းတဲ့ texture နဲ့အနံ့
Posted in, ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှု
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,385 စက္ကန့်ကျော် Generate ။